Ny kinova IPFS 0.6 vaovao dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
vao haingana ny famoahana ny kinova vaovao dia nambara rafitry ny rakitra itsinjaram-pahefana IPFS 0.6 (Rafitra rakitra InterPlanetary), izay mamorona fitehirizan-drakitra manerantany naparitaka tamin'ny endrika tambajotra P2P misy rafitra mpikambana. IPFS manambatra ireo hevitra napetraka teo aloha tao amin'ny rafitra toa ny Git, BitTorrent, Kademlia, SFS ary Web ary mitovy amin'ny "mpivady" BitTorrent tokana (mpiara-miasa mandray anjara amin'ny fizarana) mifanakalo zavatra Git.
Ny IPFS dia tsy mitovy amin'ny firesahana amin'ny atiny fa tsy ny toerana sy ny anarana tsy miankina. Ny kaody fampiharana fampiharana dia voasoratra ao amin'ny Go ary zaraina ambanin'ny fahazoan-dàlana Apache 2.0 sy MIT.
Ao amin'ny IPFS, ny rohy hidirana amin'ny fisie dia mifandray mivantana amin'ny atiny ary misy hash cryptographic an'ny atiny. Ny adiresy fisie dia tsy azo soloina anarana ara-dalàna, azo ovaina ihany rehefa avy nanova ny atiny.
Toy izany koa, tsy azo atao ny manova ny fisie raha tsy manova ny adiresy (hijanona amin'ny adiresy taloha ilay kinova taloha, ary amin'ny alàlan'ny adiresy hafa no hisy ilay iray vaovao, satria hiova ny hash amin'ny atin'ny rakitra).
Koa satria miova isaky ny miova ny mpampahafantatra ny rakitra, mba tsy handefasana rohy vaovao isaky ny mandeha, dia omena serivisy hampifandraisana ireo adiresy maharitra izay mandray amina kinova samihafa amin'ilay rakitra (IPNS), na hanitsiana solonanarana mitovy amin'ny FS sy DNS nentim-paharazana. (MFS (Mutable File System) sy DNSLink).
Ny IPFS dia manampy amin'ny famahana olana angano toy ny fahamendrehana fitehirizana (raha toa ka tsy mandeha ny fitehirizana tany am-boalohany dia azo sintonina avy amin'ny rafitry ny mpampiasa hafa ny rakitra), fanoherana ny sivana atiny (ny fanakanana dia mitaky fanakanana ny rafitra mpampiasa rehetra izay manana kopian'ny angona) ary ny fandaminana ny fidirana amin'ny tsy fisian'ny fidirana mivantana amin'ny Internet na rehefa ratsy ny kalitaon'ny fantsom-pifandraisana (azonao atao ny misintona ny angona amin'ny alàlan'ny tambajotra akaiky indrindra eo an-toerana ).
1 Inona no vaovao amin'ny IPFS 0.6?
2 Ahoana ny fampiasana IPFS amin'ny Linux?
Inona no vaovao amin'ny IPFS 0.6?
Ny kinova vaovao dia miavaka amin'ny fampidirana ny fitaterana default mifototra amin'ny protokol QUIC, izay plug-in amin'ny protokol UDP izay manohana fampitomboana fifandraisana marobe ary manome fomba enkripsi mitovy amin'ny TLS / SSL.
Ao amin'ny IPFS, ny foibe iray handraisana ny fifandraisana UDP dia manomboka eo amin'ny adiresy sy seranan-tsambo iray ihany ho toy ny mpanara-maso fitaterana monina TCP. QUIC dia ampiasaina amin'ny fifandraisana miditra sy ivelany, ary rehefa mifandray amin'ny teboka vaovao, raha tsy misy ny QUIC dia hiverina amin'ny TCP izy io.
Ny fanavaozana faharoa zava-dehibe dia ny sTohanan'ny fitaterana azo antoka NOISE, mifototra amin'ny protokol Noise ary novolavolaina ho ampahany amin'ny libp2p, tambajotram-pifandraisana modular ho an'ny fampiharana P2P.
Taorian'ny fandrindrana voalohany ny fifandraisana, ny fifanakalozana angon-drakitra rehetra eo amin'ny mpandray anjara dia voahidy sy arovana amin'ny fisavana. NOISE no nisolo ny fitaterana SECIO, fa ny TLS 1.3 dia manohy ampiasaina ho fomba voalohany hanafenana ny fifandraisana eo anelanelan'ny node.
Tsotra ny fampiharana ny NOISE ary napetraka ho toy ny fitaterana iraisam-pirenena miampita sehatra izay azo ampiharina amin'ny fiteny fandaharana isan-karazany.
Ilay kinova vaovao manome ny fotoana hanampiana ny pejinao "404 tsy hita" anao manokana ary ampio fanohanana azo atao amin'ny fomba encode Base36, izay tsara indrindra ho an'ny angona alphanumeric tsy dia misy dikany toy ny anaran'ny sehatra (rehefa mampiasa Base32, Ed25519 IPNS lakile dia byte roa lehibe kokoa noho ny fetra amin'ny haben'ny subdomain, ary miaraka amin'ny Base36 dia mifanaraka amin'ny fetra).
Ankoatra izany, ny safidy 'pairing' dia nampiana ho an'ny setting, izay mamaritra ny lisitry ny node hifandraisana, hitazonana fifandraisana, ary hifandray indray hamaritana ny fifandraisana "sarotra" eo amin'ireo mitovy taona matetika ampiasaina.
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity kinova vaovao ity ianao dia azonao atao ny manamarina ny pitsopitsony, amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fampiasana IPFS amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fampiharana IPFS ao amin'ny rafitr'izy ireo dia afaka manao izany amin'ny fanarahana ny torolàlana izay no tsipiriany ato amin'ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny kinova IPFS 0.6 vaovao dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Kao dia hoy izy:
Ity dia zavatra efa hitako teo aloha, saingy tsy azoko hoe inona no fampiasana azy. Heveriko fa misy serivisy na rindranasa efa mampiasa an'io ho an'ny zavatra azy ireo, saingy mbola tsy nanandrana aho.
Mamaly an'i Kao
Tonga ny kinova vaovao an'ny Free Pascal 3.2.0 ary ireo no fanovana azy